NextsChain Kubatsira Zvakakosha - Inotevera Supply Chain
Pfungwa huru Simbisa Tsananguro
Kurumidza & Mahara Kutumira Zvinotora nezve 5 - 8 mazuva ebhizinesi kusvika kuUS, mazuva matatu kusvika ku8 kuJapan, Korea, Singapore, Malaysia. Uye angangoita 4 - mazuva gumi kusvika Canada, Australia, Mexico, kana iyo EUR nyika.
Tsika Kurongedza & Branding Gadzirisa logo yako brand pane zvigadzirwa zvako. NextsChain inotsigira OEM & ODM kugadzirisa maitiro echiratidzo chako muchiratidzo chako chemabhokisi.
Imwe-Mira Kudonhedza Isu tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekutengesa. Mushure mekutengesa, zvese zvinofanirwa kuitwa kubhadhara uye NextsChain inozadzisa mirairo yako. Isu tobva tatumira mapakeji ako kunze tichishandisa yekukurumidza kutumira nzira, uye nekuendesa iyo yekutevera nhamba kune yako maodhi. Haufanire kuita chero chinhu. Sezvineiwo, iwe unozoponesa inenge 90% yenguva yako. Iwe haufanire kunetseka pamusoro peiyo hesera, yakareba nguva yekutumira kana yako Aliexpress account kuvharwa.
Raira Kurumidza NextsChain inokutendera kuti uise zana emaodha mumaminetsi, nekukurumidza kupfuura chero zvimwe zvishandiso! Sevha nguva uye uwane kushanda pamwe neAliExpress kudonha mudiwa!
Mamirioni ezvigadzirwa zviri nani Vatengi vanozove neakasiyana epamusoro evanopa uye vanosarudza kubva kune yakawanda yezvinhu zvinopfuura mazana mashanu ezviuru pamutengo wekutengesa. NextsChian zvakare inopa Zvinokunda zvigadzirwa uye Zvigadzirwa zveTrending kubatsira vatengesi vedu kumhanyisa bhizinesi ravo rekudonha zvinobudirira.
Mirairo Auto-Kuzadzikiswa Isu tinongori tinya kure nekuzadzisa mirairo yako yese. Isu tichaita yemhando kutonga, kurongedza uye kutumira kune ako vatengi zvakananga.
Package Kuchengeta & Gadzirisa Needu Akangwara package package system, NextsChain rega iwe ubate pasuru yako zvakanaka, unogona kuwana zviri nyore kuti pasuru yako riini uye pavanouya panguva ipi. Kuti udzivise vatengi vazhinji vanogunun'una uye chengetedza yakawanda nguva.
Buck Hora Rutsigiro NextsChain inopa zvirinani uye zviri nyore kushandisa Buck edit chishandiso kukurega iwe kuti utonge zvigadzirwa zvako Kunyora zvakanaka zvine nguva shoma. Iwe unogona kuve nenguva yakawanda yekuteerera kushambadziro yako uye vamwe bhizinesi rekutengesa.
Auto Inventory & Mutengo Manage Yechokwadi-nguva ekuverenga manejimendi masevhisi, uye Yekuzviongorora Mutengo kugadzirisa uye ziviso nemutemo. Iyo imwe nzira yakanaka kune AliExpress
Gadzira Oberlo Kana iwe uri kuita kudonhedza bhizinesi ne oberlo pamberi. hatigone kungokubatsira kupfupisa nguva yekuendesa uye kurongedza tsika nekumaka zvigadzirwa zvako, asi zvakare zvinokubatsira kupinza zvigadzirwa kubva oberlo kuenda kuNextsChain nezvigadzirwa zvinongedzo uchingobaya mashoma pane kuteedzera imwe neimwe.
Nokusingaperi Mahara Chirongwa Isu tinopa zvachose chirongwa chemahara
Kugamuchira Dhizaini NextsChain App ine yakanaka inoteerera dhizaini, shanda zvakanaka neako smartphone, Tafura kana PC compuer. iwe unogona kubata rako rekudonha bhizinesi chero nguva uye chero kupi.